मुसहर परिवारको चुलो बलेन, राहत वितरणमा ढिलाई -
मुसहर परिवारको चुलो बलेन, राहत वितरणमा ढिलाई
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख १७, २०७७ समय: ११:०९:३९
लकडाउनको समयमा रामधुनी वडा नं. ९ का मुसहर परिवारको विजोग भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्नको लागि देशमा गरिएको लकडाउनले गर्दा मुसहर समुदायको दिनचर्या दुःखदायी बन्दै गइरहेको छ ।
ज्याला मज्दुरी गर्ने मुसहर (ऋषिदेव) हरु यतिवेला घरमा भोकभोकै बस्न बाध्य रहेको बताउँछन् । रामधुनी नगरपालिका वडा नं. ९, मर्चैया गाँउमा तिन टोल मिलाएर करिव २०० जनाको बस्तिमा ५०० भन्दा बढी जनसंख्या मुसहरहरुको रहेको छ । रामधुनी नगरपालिकामा सुकुम्बासीहरुको बस्ती मध्ये सबै भन्दा ठूलो बस्तीको रुपमा ९ नं. वडाको मुसहर बस्ती रहेको छ । यी समुदाय दैनिक ज्याला मज्दुरी गर्ने र ज्यालाकै रकमबाट खाद्य सामान खरिदगरी दैनिक रुपमा छाँक टार्ने गर्दछन् । यस ठाउँका ५५ वर्षिय झफ्री सदाले दिनमा एक छाँक मात्र खाने गरेको बताउँछन् । उनले यतिबेला कुनै काम पनि छैन, आफ्नो खेतीपाती पनि छैन, हुनेखानेलाई ऋणपान माग्दा कसैले पत्याउँदैन दुखेशो पोखेका छन् । स्थानिय वडा कार्यालयले करिब १ महिना अगाडि राहत वितरण गरेको छ । सो राहत प्रति व्यक्ति ३ देखी ४ किलो चामलको हिसावमा परेको छ भने वृहत्त परिवारलाई पनि २० किलो चामल ३ केजी दाल, आधा लि. तेल, १ पोका नुन, २ वटा साबुन वडाले वितरण गरेको थियो ।
सोही ठाउँ बस्ने पल्टन सदाले आफ्नो ७ जनाको परिवार रहेको र यतिबेला भोकभाकै बस्न बाध्य भएको बताए । उनी भन्छन “हमीलाई समस्या पर्दापनि कसैले बुुझेनन् । कहिलेकाही गाउँमा प्रहरी गस्ती गर्दै आउने गर्छन, बन्दले गर्दा सबै घरमै बस्छौं । स्थानिय जनप्रतिनिधिसँग राहत माग्न जाँदा जन बैन गरेर खान भन्छन्, बन्दीको बेलामा काँ गएर जन गर्नु ?हामी जसो तसो बाँची रहेका छौं तर बालबच्चालाई के खुवाउने भनी दुखेशो पोखे ।”
यसठाउँमा बालबालिका, महिला लकडाउनले गर्दा बढी प्रभावित रहेका छन् । सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरुको झन विजोग रहेको छ । यसैबेला कालगतिले मृत्यु भएका परिवारको पिंडा झनै दर्दनाक रहेको छ ।
यस ठाउँमा बस्तै आएका सन्जय ऋषिदेवकी पत्नीले एक हप्ता अगाडि जुम्लिया बच्चा जन्माइन्, तर एउटा बच्चामात्र जिवित छ । उनका साँसुआमाका अनुसार ऋणपान गरेर छोरीको सुत्केरी गराउन इनरुवा अस्पताल पुगेको र त्याहाँबाट विराटनगर रेफर गर्दा झनै समस्यामा परेको उनले सम्झिन । एम्बुलेन्स भाडा समेत नभएको तिनले सुत्केरी आमा तथा बच्चाको स्याहार गर्न निकैनै समस्या भइरहेको बताइन् ।
त्यसतै सोही ठाउँ बस्ने ६५ वर्षिय कैलु सदाको आइतबार कालगतिले निधन भएको उनका छोरा ज्ञनचन सदाले बताए । वुवाको काजक्रियामा बसेका ज्ञानचनले आफैलाई खान समस्या रहेको बेला काजक्रिया कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको बताए ।
यी समुदायमा लकडाउन र सामाजिक दुरीको बारेमा प्रश्न गर्दा आफुहरु पढेलेखेको छैन, त्यती जान्दिन, बन्छ छ भन्छ यस कारण घरमै बसिरहेको उनीहरुले बताए । कोरोना भाइरस संक्रमणबारे पनि खाशै जानकारी नभएको उनीहरु बताउछन् । गाउँमा यी समुदायले सामाजिक दुरी समेत पालना गरिएको देखिएन । मास्क पनि केही व्यक्तिले मात्र लगाएको देखियो । रामधुनी ९ मा पर्ने यो गाउँ नगरपालिका प्रमुख जय प्रकास चौधरीको गाउँ सँगै मुसहर बस्ती जोडिएको छ । यता नगरपालिकामा राहतको बारेमा बुझन खोज्दा दोश्रो चरणको राहत चाँडै वितरण हुने जानकरी नगरश्रोतले दिएको छ ।